Hordhac: madal lagu horumariyo laguna dhiso aaladaha mobilada | Laga soo bilaabo Linux
Andrew Huang, u doode caan ah ee qalabka furan iyo ku guuleystaha abaalmarinta 2012 EFF Pioneer Award, soo bandhigay barxada isha furan «Precursor» loogu talagalay fikradaha aaladaha cusub ee mobilada.
Si la mid ah sida Raspberry Pi iyo Arduino ay awood ugu siinayaan aaladda Internetka Waxyaabaha, Hordhaca ujeedadeedu tahay inay bixiso awood u leh qaabeynta iyo uruurinta aaladaha kala duwan ee mobilada gacmahaaga si aad u xalliso dhibaatooyinkaaga.
Shahaadada waxaa loo taagay sidii meelihii loogu talagalay sameynta noocyada hore iyo xaqiijin, halka Betrusted waa mid ka mid ah qalabka moobiilka ee diyaarka u ah in la isticmaalo ee lagu dhisay aasaaska Precursor.
Maaddaama xirmooyinka dhaqameed ee loo isticmaalo kaydinta furaha sirta ah ee loo yaqaan 'cryptographic key key' aysan ka difaacinaynin weerarada heerka sare ah, sida uruurinta ereyga sirta ah adoo adeegsanaya gogosha keystroke ama marin u helista farriimaha shaashadda, Betrusted waxay ku dareysaa walxaha isdhexgalka isticmaalaha HCI, isdhexgalka aadanaha iyo kumbuyuutarka), hubinta in macluumaadka xasaasiga ah ee uu akhrin karo bini aadamka aan waligood la keydin, la soo bandhigin, ama lagu gudbinin meel ka baxsan qalabka la ilaaliyo.
Si ka duwan mashaariicda kale, Precursor wuxuu siiyaa dadka xiisaha u leh maahan kaliya guddi, laakiin waa nooc horudhac ah si aad uga isticmaasho qalab la qaadan karo:
a 69 x 138 x 7,2 mm guryaha aluminium
Shaashadda LCD (336 × 536)
batari (1100 Mah Li-Ion)
xawaare iyo mitir.
Qeybta xisaabinta lama siinayo processor diyaar u ah in la isticmaalo, laakiin waxaa lagu qeexaa SoC softiweer ah oo ku saleysan Xilinx XC7S50 FPGA, iyadoo lagu saleynayo ku dayashada 32-bit RISC-V CPU oo ku shaqeeya 100MHz.
Isla mar ahaantaana, ma jiraan wax xaddidan oo ku saabsan ku dayashada qaybaha kale ee qalabka, tusaale ahaan, hawlgalka processor-yada kala duwan, laga bilaabo 6502 iyo Z-80 ilaa AVR iyo ARM, iyo sidoo kale jibbaarada dhawaaqa iyo kontoroolayaasha kala duwan, ayaa lagu dayan karaa.
Guddiga waxaa ku jira 16MB SRAM, 128MB Flash, Silicon Labs WF200C Wi-Fi, USB Type-C, SPI, I²C, GPIO.
Awoodaha amniga la xiriira, waxaa jira laba matoorro qalab-been abuur ah oo been abuur ah.
Si xiiso leh, qalabka asal ahaan wuxuu yimaadaa iyada oo aan mikirifoonka lagu rakibin; Waxaa la fahansan yahay in soo dhaweynta dhawaaqa ay macquul tahay oo keliya marka sameecadaha dhagaha ay si cad isugu xiran yihiin, oo hadii dhagaha la furo ay go'antahay, jir ahaan macquul maahan in abaabul dhegeysi la sameeyo, xitaa haddii barnaamijyada qalabka wax lagu jabiyay.
Qeybta xiriirka wireless (Wi-Fi) waa qalab ka go'an madasha inteeda kale wuxuuna ku shaqeeyaa jawi gooni ah.
Si looga ilaaliyo marinka aan la fasaxin, guri la xidhi karo, RTC gaar ah oo loogu talagalay raadraaca sharafta, kormeerka dhaqdhaqaaqa ee qaabka heeganka (xawaare-dhaqameedka iyo qalabka jimicsiga ee had iyo jeer la isticmaalo) ayaa sidoo kale la isticmaalaa. Waxa kale oo jira silsilad is-duminaysa oo isla markiiba masaxaysa dhammaan xogta, oo lagu hawlgeliyo furaha AES.
Luqadda FHDL Migen (luqadda sharaxaadda qalabka jajaban) oo ku saleysan Python loo adeegsaday in lagu sharaxo qaybaha qalabka.
Migen waa qayb ka mid ah qaab-dhismeedka LiteX, oo bixisa kaabayaasha si loo abuuro wareegyo elektaroonik ah.
Iyada oo ku saleysan Precursor iyadoo la adeegsanayo FPGA iyo Litex, tixraac Betrusted waa SoC oo la diyaariyey, oo ay ku jiraan VexRISC-V RV32IMAC 100 MHz CPU, iyo sidoo kale darawal Betrusted-CE oo lagu dhejiyay 18 MHz Litex VexRISC-V RV32I core.
SoC Betrusted waxay bixisaa nooc dhisme ah oo horudhac ah, sida matoor lambar been abuur ah, AES-128, -192, -256 leh ECB, CBC iyo qaababka CTR, SHA-2 iyo SHA-512, Curve25519 elliptic curve crypto engine. Mashiinka sirta ayaa ku qoran SystemVerilog wuxuuna ku saleysan yahay udub-dhexaadka sirta ee mashruuca Google OpenTitan.
Dhammaan qaybaha Precursor iyo Betrusted waa ilo furan waxaana loo heli karaa wax ka badal iyo tijaabin hoos timaada Shatiga Furan ee Hardware-ka loo yaqaan 'Open Hardware License 1.2', oo u baahan in dhammaan shaqooyinka soosaara ay ku furmaan isla shati.
Oo ay ku jiraan wareegyada furan iyo dukumintiyada naqshadeynta buuxa ee looxyada waaweyn iyo kuwa caawiya, Betrusted SoC oo diyaar u ah hirgelinta, iyo xakamaynta xakamaynta (EC).
Haddii aad xiiseyneyso inaad waxbadan ka ogaato, waad iska diiwaan gelin kartaa iskuxiraha soo socda si laguu ogeysiiyo goorta ay madashu socoto waa la heli karaa
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » Horudhac: barxad lagu horumariyo laguna dhiso aaladaha mobilada
FreeCAD, oo ah il-bixiye bilaash ah oo furan oo iskudhaf ah oo qaab-dhismeedka 3D ah